Ubume benkcazo ye-Crusade yabantu
Imbali kunye neNkcubeko Kubalulekileyo Abantu & Imicimbi
Intlangano eyaziwayo yabo baqhankqalazi, ngokuqhelekileyo abaqhelekileyo kodwa kubandakanywa nabantu abavela kuzo zonke iindawo zoluntu, abangazange balinde iinqununu ezisemthethweni zenkcitho kodwa bahamba beza kwiLizwe elingcwele, bangazilungelekanga kwaye abanamava.
I-Crusade yabantu yaziwa nangokuthi:
Ulwahlulo lwabalimi, i-Popular Crusade, okanye i-Crusade ye-Poor People. I-Crusade yaBantu ibizwa ngokuba "ngumswakaliso wokuqala" weentlanga zamaqela olwabalaseleyo ngabafundi beNkqubela yamaJaji uJonathan Riley-Smith, oye wabonisa ubunzima bokuhlukanisa iindidi ezahlukileyo zokuhamba phakathi kweentaba zokuhamba ezivela eYurophu ukuya eYerusalem.
Indlela iNkqubela yabantu eyaqala ngayo:
NgoNovemba 1095, uPapa Urban II wenza intetho eBhunga laseCermermont esithi amaqhawe angamaKristu aye eYerusalem aze ayikhulule ekulawulweni kwamaTurkey aseTurkey. I-Urban ngokungathandabuzeki yayibhekisele umkhankaso wemikhosi okhokelelwa yilo lonke elaseklasini lonke lwakhiwe ngeenxa zonke zempi. Wabeka umhla osemthethweni wokuhamba phakathi ko-Agasti wonyaka olandelayo, ukwazi ixesha eliza kuthatha imali ukuze kuphakanyiswe, unikezele ukuthengwa kunye nemikhosi ukuba ihlelwe.
Kungekudala emva kwentetho, i-monk eyaziwa ngokuba nguPeter uHermit nayo yaqala ukushumayela iCrostade. U-Charismatic and passionate, uPetros (kwaye mhlawumbi nabanye abambalwa abanjengoye, abo amagama abo balahlekelwa kuthi) abhenxanga nje kwinxalenye ekhethiweyo yamaxhoba alungele ukuhamba kodwa kuwo wonke amaKristu - amadoda, amabhinqa, abantwana, asebekhulile, abahloniphekileyo, abaqhelekileyo - nokuba ngamaseva. Iintshumayelo zakhe ezakhayo zagxotha inzondelelo yenkolo kulaphulaphuli bakhe, kwaye abantu abaninzi abazange bathethe kuphela ukuhamba kwiNkqubela kodwa bahambe ngoko kanye nakhona, abanye bebalandela uPetros ngokwakhe.
Inyaniso yokuba banokutya okuncinci, imali encinci, kwaye akukho mva yezempi ayizange ibenqande ubuncinci; Bekholelwa ukuba babekho emsebenzini oyingcwele, kwaye uThixo uya kunika.
Imikhosi ye-Crusade yabantu:
Kwexesha elithile, abathathi-nxaxheba kwi-Crusade yaBantu babonwa njengento engaphezu kwezilwanyana.
Nangona kunjalo ininzi kubo yayingabantu abaqhelekileyo beentlobo ezahlukeneyo okanye enye, kwakukho nabahloniphekileyo phakathi kwabo, kwaye amaqela awakhiwe aqhele ukukhokelwa ngabaqeqeshi abaqeqeshiwe, abanamava. Ngokona nxalenye, ukubiza le mikhawulo "imikhosi" yayiza kuba yinto engaphezu kweyonke; kumaxesha amaninzi, amaqela ayengumqoqo wabathunywa abahambahamba kunye. Abaninzi babehamba ngeenyawo kwaye bexhobile izixhobo ezingekho phantsi, kwaye ukuqeqeshwa kwakungekho nto. Nangona kunjalo, ezinye iinkokeli zazikwazi ukulawula ngakumbi abalandeli babo, kwaye isikhali esingafanelekanga singasenza umonakalo omkhulu; ngoko abaphengululi baqhubeka bebhekisela kwamanye amaqela njengemikhosi.
I-Crusade yabantu ihamba ngeYurophu:
Ngo-Matshi 1096, iinqununu zabahambahambayo zaqala ukuhamba empuma ngeFransi naseJamani kwindlela eya kwiLizwe elingcwele. Uninzi lwalo lwalulandele indlela endala yohambo oluhamba ngeDanube ukuya eHungary, ngokokusezantsi ukuya kwiBukhosi baseByzantine kunye nenqununu yalo, eConstantinople . Baye balindele ukuwela iBosphorus ukuya kwintsimi elawulwa yiTurkey e-Asia Minor.
Owokuqala ukushiya eFransi nguWalter Sans Avoir, owawisela i-knin of eight knights kunye nenkampani enkulu yokuzalwa.
Bahamba ngesiganeko esincinci kwindlela yakudala yokuhamba, befumana kuphela intlungu engokoqobo eBelgrade xa ukufumana ukutya kwabo kwavela. Ukufika kwabo kwasekuqaleni kweConstantinople ngoJulayi bathabathelwa ngabaholi beByzantine; babengenalo ixesha lokulungiselela ukuhlala okufanelekileyo kunye neendawo zokungena kwiindwendwe zabo zasentshonalanga.
Amaqela amaninzi eenkcenkceshi adibana kunye noPetros iHermit, owayengalandeli emva kukaWalter namadoda akhe. Omkhulu ngenani kwaye engacetywanga, abalandeli bakaPetros bafumana ingxaki enkulu kwiiBalkan. EZemun, idolophu yokugqibela eHungary ngaphambi kokufikelela emngceleni waseByzantine, kwaqhamuka intlungu kwaye abaninzi baseHungary babulawa. Abaqhankqalazi babefuna ukuhlwaywa ngokuwela uMlambo waseSava ukuya eByzantium, kwaye xa amabutho aseByzantine azama ukuwayeka, ubundlobongela buqhubekile.
Xa abalandeli bakaPetros beza eBelgrade bafumanisa ukuba bayashiywe, kwaye mhlawumbi bawuthatha ngokufuna kwabo ukutya. Kwi-Nish esondeleyo, urhuluneli wabavumela ukuba batshintshisane nabathunjiweyo ngempahla, kwaye idolophini yaphantse ibalekele ngaphandle kokulimala kwaze kwafika amaJamani atsha umlilo kwiindlwana njengoko inkampani yayishiya. Irhuluneli yathumela imikhosi ukuba ihlasele ababaleki, kwaye nangona uPetros wayala ukuba bangabikho, abaninzi abalandeli bakhe bajika bajamelana nabahlaseli baza bachithwa.
Ekugqibeleni, bafika eConstantinople ngaphandle kwesiganeko esithile, kodwa abantu abaye bathatha inxaxheba baye balahlekelwa yintsimi-mali kunye nezimali zabo, kwaye babenomonakalo omkhulu kumhlaba phakathi kwamakhaya abo neByzantium.
Ezinye iindidi zeendwendwe zilandela emva kukaPetros, kodwa akakho owazenza kwiLizwe elingcwele. Abanye babo babulala baza babuya; abanye baphazamiseka kwezinye zezinto ezinobungozi kakhulu kwiimbali zaseYurophu.
I-Crusade yabantu kunye neHolocaust yokuqala:
Iintetho zePapa Urban, uPeter uHermit, kunye nabanye be-ilk bakhe bavuselela ngaphezu kobuqili abanqwenela ukubona umhlaba oyiNgcwele . Isibheno saseMzaneni kwinqanaba elinobukroti liye lalalisa amaSulumane njengeentshaba zikaKristu, eziphantsi komntu, ezinyanyekayo, kwaye zifuna ukunqotshwa. Iintetho zikaPetros zazingakumbi.
Kulo mbono ongeyiphikisayo, kwakuyinyathelo elincinci ukubona amaYuda akhanyiswa. Kwaye, ngokudabukisayo, inkolelo efana nayo yonke into yokuba amaYuda awazange ambulale uYesu kuphela kodwa aqhubeka ebeka ingxaki kumaKristu amnandi. Ukongezwa kule nto yinto yokuba amaYuda athile ayenempumelelo, kwaye ayenzela iinjongo eziphathekayo kubalawuli abanobukrakra, abasebenzisa abalandeli babo ukubulala amaYuda onke kunye nokuphanga ngenxa yobutyebi babo.
Ubundlobongela obwenziwe kumaYuda aseYurophu entwasahlobo ka-1096 luphawu oluphawulekayo kwiintsebenzo zobuKristu namaYuda. Iziganeko eziyingozi, ezibangelwa ukufa kwamawaka amaYuda, ziye zabizwa ngokuba yi "First Holocaust".
Ukususela ngoMeyi ukuya kuJulayi, i-pogroms yenzeke kwi-Speyer, i-Worms, i-Mainz neCologne. Kwezinye iimeko, umbhishophu wedolophu okanye amaKhristu asekuhlaleni, okanye zombini, wayekhusele abamelwane bawo. Oku kwaphumelela kwi-Speyer kodwa yabonakala engenamsebenzi kwezinye iidolophu zaseRhineland. Abanye abahlaseli bafuna ukuba amaYuda atshintshele ebuKristwini kwindawo okanye alahlekelwe ubomi bawo; Abazange nje bafune ukuguqula, kodwa abanye babulala abantwana babo kunye nabo ngokwabo kunokufa ezandleni zabo.
Eyona nto idumileyo yabanquli bamaYuda ababalaseleyo babengu-Count Emicho waseLeiningen, owayenobungqina bokuhlaselwa ku-Mainz naseCologne kwaye unokufumana isandla ekubulaweni kwangaphambili. Emva kokuba igazi liphephe iRhin, kwafika uEmicho waya eHungary. Idumela lakhe lingaphambi kwakhe, kwaye amaHungary ayengamvumeli ukuba adlule. Emva kokuvinjelwa kweeveki ezintathu, imikhosi kaEmicho yachithwa, waza waya ekhaya ehlazo.
Ama-gromroms ahlaselwa ngamaKristu amaninzi emini. Abanye babhekisela kule nzobo-mthetho njengesizathu sokuba uThixo ashiye abazalwana be-Nicaea kunye ne-Civetot.
Ukuphela kweNkqubela yabantu:
Ngethuba likaPetros uHermit efika eConstantinople, umkhosi kaWalter Sans Avoir wawungalindelanga ngaphandle kweeveki.
UMlawuli uAlexius wamqinisekisa uPetros noWalter ukuba bafanele balinde eConstantinople de kubekho iqela eliphambili labaQelayo, ababethelela eYurophu phantsi kwamakhompe ahloniphekileyo. Kodwa abalandeli babo babengavuyiswa nesigqibo. Baye bahamba uhambo olude kunye nezilingo ezininzi ukuba bafike apho, kwaye babezimisele ngamandla izenzo kunye nozuko. Ukongezelela, kwakungekho ukutya okwaneleyo kunye nokubonelela kwabo bonke abantu, kwaye ukuxhaphaza nokweba kwakuxhaphake. Ngoko, ngaphantsi kweveki emva kokufika kukaPetros, uAlexius wafaka i-People's Crusade kwiBosporus naseAsia Minor.
Ngoku abahlali beenkcenkceshi beyintsimi enenzondelelo apho kwakukho ukutya okulula okanye amanzi atholakala naphi na, kwaye babengenaso isicwangciso sokuqhubeka. Bakhawuleza baqalisa ukudibana phakathi kwabo. Ekugqibeleni, uPetros wabuyela eConstantinople ukucela uncedo ku-Alexius, kwaye i-People's Crusade yaba ngamaqela amabini: enye iyenziwe ngamaJamani kunye namaTali ambalwa, elinye lamaFrentshi.
Ngasekupheleni kukaSeptemba, ama-crusaders aseFransi akwazi ukuphanga indawo yaseNicaea. AmaJamani anquma ukwenza okufanayo. Ngelishwa, imikhosi yaseTurkey yayilindele olunye ukuhlaselwa kwaye yajikeleza amaJaji aseJamani, eyakwazi ukukhusela kwinqaba yaseXerigordon. Emva kweentsuku ezisibhozo, ama-crusaders anikezela. Abo bazange baphenduke kwi-Islam babulawa khona; abo baphenduka babekhoboka kwaye bathumela empuma, abayi kuphinda bavelelwe kwakhona.
AmaTurks ke athumela umyalezo osisigxina kuma-crusaders aseFransi, etshilo ngobutyebi obukhulu amaJamani awakuthole. Nangona izilumkiso ezivela kubantu abanobuqili, amaFrentshi athatha umlenze. Baye baqhubela phambili, beza kuhlaselwa e-Civetot, apho yonke i-crusader yokugqibela yabulawa.
I-Crusade yabantu yaphelile. UPetros wacinga ukubuyela ekhaya kodwa wahlala eConstantinople de kube kufikeleleke iqela eliphambili lomkhosi wecala lokumelana .
Umbhalo walolu xwebhu ngumgaqo-copyright © 2011-2015 Melissa Snell. Ungayilanda okanye uprinte le dokhumenti ngokusetyenziswa kobuqu okanye esikolweni, nje kuphela i-URL engezantsi ifakiwe. Imvume ayinikezelwa ukuvelisa eli xwebhu kwenye iwebhusayithi.
I-URL yale dokethi yile: www. / i-people-crusade-1788840
UCharles VII waseFransi
UPapa Leo III
I-Biography ka-Audrey Hepburn
Prefixes ekwahlukileyo kwisiJamani
Yintoni ongayenza Ukuba Ulahlekelwa kwiKlasi kwiKholeji
Funda ngeZinyama zeXhobo
Iifayile eziPrintwayo, iiProjekthi kunye neeFomu eziprintiweyo
I-Hunter College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Umdlalo weClass Breaker Game kubadala: i-Mix-2 Minute Mixer
IiVasa H-2A y H-2B kunye ne-reclutamiento de migrantes temporeros e-Mexico
I-Admissions yaseYunivesithi yaseLincoln
Ukushisa okuphezulu kweThermoplastics
Uyakubhekisela njani kwiminyaka elishumi ngeSpanish?
Indlela I-Nursery Rhyme 'Eins, Zwei, Polizei' Inokusinceda Ufunde isiJamani
Ukuloba i-Catfish kumaLwandle
Intlawulo yeendwendwe - Intlawulo yeNtlawulo
Iingxelo zokuThengiswa koMzekelo IsiNgxaki
Iikhompyutha ze-Intanethi ze-Intanethi Ziqokelela Ukuchongwa koBuntu kunye neMali
Isihlandlo samafilosofi aseGrike namaRoma
Nguwuphi uhlobo loMsebenzi weMathematika yilo?
Yintoni i Khan?
Iimvavanyo eziqhelekileyo zokuVavanya